February 15, 2012 by chowutyee
oh oh so cool look yummy…wow my twin is so clever 😉
thank friend!!! 😉
taw lite tar wut yee… really look like Rose.. 😀
hee Thanks Ma July!!! 🙂
ကျေးဇူးပါ ခင်နီလာရေ… ကြက်ဥအနှစ်က အစိမ်းကို ခလောက်ပြီး ထည့်ရမှာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါ၊ စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်.. 🙂
ညီမ လုပ်လည်း နှင်းဆီပန်းနဲ့ တူမှာပါ ညီမ။ လုပ်ရတာ ထင်သလို မခက်ဘူး။ ပုဇွန်လေးတွေကို အဆင့်ဆင့် ထပ်သွားရုံပဲ။ အားရင် ချက်စားကြည့်နော်… နောက်လည်း လာလည်အုန်းနော်. 🙂
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ မိုးပွင့်ကို အထူးကျေးဇူးနော်.. 🙂